Maninona Aho No Tsy Miaraka Amin’ny Feminisma, Na Dia Iombonana Aza Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2017 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Ελληνικά, русский, Deutsch, Português, 繁體中文, Français, Italiano, Español
Sary navoaka tao amin'ny Pixabay ary nampiasaina eto amin'ny alalan'ny lisansa CC0 Creative Commons.
Dika nasiam-panovana tamin'ny lahatsoratr'i Ayomide Zuri, nivoaka voalohany tao amin'ny Afroféminas ity. Niteraka adihevitra lehibe tao amin'ny takelaka fametrahana fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra tany am-boalohany izany.
Vehivavy marobe—indrindra ireo vehivavy fotsy hoditra milaza fa mpanandratra vehivavy iombonana—no diso fanantenana raha nilaza aho fa tsy mpanandratra vehivavy. Nanontany ny antony tsy andraisako anjara amin'ny hetsika izy ireo. Niezaka nandresy lahatra ahy mihitsy aza izy ireo tamin'ny fampiasana tohan-kevitra ara-panabeazana sy ara-tsosialy izay heverina fa antony tokony mahatonga ahy ho mpanandratra vehivavy.
Ohatra, nitanisa ny zava-misy izy ireo fa mbola mandray vola kely noho ny lehilahy mitovy fahaizana amin'izy ireo ny vehivavy. Mbola iharan'ny fanarahamaso akaiky mikasika ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny vatany ny vehivavy. Ary mihanaka manerantany ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy. Ary manakana ny vehivavy tsy hahazo fahombiazana amin'ny sehatra samihafa izany sakana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy izany, ary mahazatra ny fanavakavaham-behivavy any amin'ny firenena maromaro sy ny vondrom-piarahamonina ara-pivavahana.
Fantatro tsara izany rehetra izany. Fantatro izany, fantatro fa marina izany ary efa imbetsaka aho no niaina izany. Vehivavy mainty hoditra aho.
Na izany aza, raha miresaka momba ny firazanana, ny fanavakavahana, ny vehivavy mainty hoditra, ireo vehivavy LGBTiQ mainty hoditra, na ireo vehivavy mainty hoditra am-pielezana sy ny fomba nanavahana sy nanilikilihana anay—raha nilaza ny fomba fanitsakitsahana ahy ara-batana sy ara-pihetsehampo sy am-bava tao anatiny sy ivelan'ny hetsika feminista aho, dia nangina ny maro tamin'ireo fotsy hoditra mpanandratra vehivavy. Manaiky anefa izy ireo fa ny vehivavy, ny vehivavy rehetra dia tokony hiara-mivondrona mba “hanandratra ny feony sy hihira” ny “Kumbuyah, My Lord” hitakiana ny zon'ny vehivavy (sasany).
Saingy tsy te hiresaka momba ny herisetra ara-pirazanana ao amin'ny fanjakana ho toy ny zavatra miavaka amin'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, sy amin'ireo vehivavy mainty hoditra indrindra izy ireo. Na momba ny hoe vehivavy mainty hoditra sy vehivavy hafa loko mandray karama kely noho ny lehilahy sy vehivavy fotsy hoditra. Na hoe koa matetika naato tamin'ny fianarana ny ankamaroan'ireo tovovavy mainty hoditra mpifindra monina, vokatry ny olana mazava mikasika ny fampidirana (anatin'ny vondrom-piarahamonina). Na hoe koa ny vehivavy avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpifindra monina mety hiharan'ny herisetra an-tokantrano tsy toy ny vehivavy fotsy hoditra.
Raha maniry ny fitovian-jo ho an'ny vehivavy rehetra, ny lehilahy rehetra sy ny foko rehetra aho—ny tenako amin'ny maha vehivavy mainty hoditra ahy—dia tsy afaka miaraka amin'ny hetsika izay mifantoka amin'ny vehivavy fotsy hoditra sy mandà ny hampiditra ny tsy fitoviana ara-poko sy ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy. Leo aho ary tsy hiady hiditra ao anatin'ny sehatra mifandraika amin'ny vehivavy feminista izay nanilika ahy sy ny vehivavy mainty hoditra hafa imbetsaka. Tahaka ny nambaran'i Sojourner Truth tamin'ny kabariny tamin'ny 1851, “Ain't I a Woman?”, (“Tsy Vehivavy ve aho?”), dia mandà aho tsy ho anisan'ireo hetsika manaisotra ny maha-olombelona sy mampandrorona ny vehivavy mainty hoditra. Vondrona izay maka amim-pahombiazana ny fombanay sy ny fomba amam-panaonay mba hampandrosoana ny fandaharan'asan'izy ireo manokana.
Tsy hiezaka hampianatra ireo feminista fotsy hoditra intsony mikasika ny maha zava-dehibe ny fampifandraisana ny foko sy ny maha lahy sy vavy aho, satria manohy tsy miraharaha ny maha-zava-dehibe ny vehivavy mainty hoditra ao anatin'ny hetsika feminista ny sasany, na dia betsaka aza ireo vehivavy mainty miezaka mampianatra azy ireo. Na dia noforonina aza ny feminisma iombonana mba hampiavaka azy amin'ny feminisma fotsy hoditra sy hampiditra ireo vehivavy avy amin'ny foko hafa, mbola ahitana ny teny hoe “feminisma” ao amin'ny anarany. Aleoko manala ny tenako amin'ny feminisma manontolo, mba hahafahako miaina amim-piadanana ao anatin'ny sehatra Womanist [mandala ny mahavehivavy] izay noforonina tamin'ny hoditro mainty sy ny toerako amin'ny maha-vehivavy ahy ao an-tsaina, fa tsy miaro ny karazana feminista izay tena manjavozavo ary nohajaina ho zava-baovao amin'ny andro farany ny hoe iombonana.
Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny hatramin'izay, fotoana izao ho antsika vehivavy mainty hoditra mba hamaritana ny tenantsika amin'ny tenintsika manokana, ary hiaraka ao anatin'ny sehatra noforonintsika sy ho antsika. Araka ny nolazain'i Clenora Hudson-Weems, mpanoratra ny “Africana Womanism: Reclaiming Ourselves” [mitaky ny maha-antsika manokana], niresaka momba ny fiarovana ny tenantsika amin'ny alalan'ny famaritana ny tenantsika amin'ny fitenintsika manokana, azon'ny vehivavy mainty hoditra atao ny mahita fiarovana ao anatin'ny sehatra hanomezam-boninahitra ny toetrantsika ara-kolontsaina, ara-tsaina, ara-pihetsehampo, ara-batana ary koa ara-panahy mihitsy aza .
Hitabataba fisintahana sy fanavakavahana ireo feminista fotsy hoditra/iombonana sasany rehefa avy mamaky ity, saingy ampiasao azafady ity fahafahana ity mba hanabeazana ny tenanareo momba ny fihatsarambelatsihy sy ny fifanoheran-kevitra momba ny hetsika feminista manoloana ny vehivavy mainty hoditra.
Ao anatin'ny hetsika Womanista, afaka manandratra ny vehivavy mainty hoditra sy ny vehivavy avy amin'ny kolontsaina hafa aho satria ankasitrahana aho ao anatin'izany sokajy izany. Ankasitrahana ho anisan'ity hetsika ity aho noho ny hoditro mainty sy noho izaho vehivavy. Ary ao anatin'ny sehatra izay tsy mba hanajàna, tsy hiraharahiana na hanilihana ny heriko, afaka mandroso ny tenako, amin'ny maha vehivavy mainty hoditra ahy.